Mashandisiro anoita Mifananidzo application muIOS 9 | IPhone nhau
Mashandiro anoita Mapikicha Anoshanda muIOS 9
Iyo iOS Mifananidzo application inonzwisisika, asi pane nguva dzose zvinhu zvinogona kutitiza. MuIOS 9 pane zvimwe zvitsva, senge mukana wekusarudza akati wandei pasina kukosha kwekusimudza munwe kana maforodha anogadzirwa otomatiki patinotora selfie kana kutora skrini. Saka kuti usarasikirwe nechero ruzivo, mugwaro rino tichaedza kutsanangura Mashandiro anoita Mapikicha Anoshanda muIOS 9.
Mumarongedzero e iPhone, muchikamu cheMifananidzo neKamera, isu tine sarudzo yekumisikidza iCloud Photo Library. Kana isu tikamisa iyi sarudzo, iwo mafoto ese anenge ari muICloud uye anowanikwa pane chero chishandiso chinoshandisa imwechete Apple ID. Ini ndinopa zano pamusoro pekushandisa kwayo, asi ini ndinokurudzira kuve neyekutsikisa mapikicha sarudzo inogoneswa Kana isu tikamisikidza iyo iCloud Photo Library, yakajairika reel yatajaira kuti irege kuoneka. Zvandinotsanangura zvinotevera ndezve ICloud Photo Library yakaremara.
Chinhu chekutanga chatinozoona kana tichipinda iwo ekushandisa Mifananidzo matatu matatu.
MuMifananidzo tebhu tichaona yedu momentos. Nguva idzi ndidzo yakaparadzaniswa nemakore uye kuunganidzwa. Kana tikabata zvigunwe zvemifananidzo, isu tichafambira mberi kubva pamakore kuenda kuunganidzwa uye kubva kuunganidzwa kusvika kunguva. Kana isu takagadziriswa geolocation, tinogona kubata zita reguta, iro rinozovhura thumbnail yemepu uye nekuisa mifananidzo pairi nebhaluni rebhuruu rinoratidza kuti mangani mapikicha atakatora munzvimbo yega yega.
Tab Kugoverwa Mifananidzo iyo yatinogovana kana iyo vatinogovana navo nesu ichaonekwa. Ini handina iyo yakamisikidzwa, asi mifananidzo inogona kugovaniswa nekutepa pa "Kutanga kugovana", kugadzira dambarefu uye kuratidza rinozivikanwa Apple ID.
Tab Albums ndipo patinogona kutaura kuti yakajairika reel neese maforodha edu ari.
MuAlbums tab tichava ne:
Reel. Mune ino folda mifananidzo yese yatinayo pane yedu iPhone inoiswa.
Mifananidzo yangu mukutenderera. Kana isu tichiita kuti iitwe kubva kune iyo iPhone marongero, ekupedzisira 1000 mapikicha kana ayo emazuva makumi matatu ekupedzisira akatorwa nechero chishandiso chinoshandisa iyo imwechete Apple ID uye ine yekumhanyisa mafoto akaitwa ichawedzerwa pano.
Vhidhiyo. Mune ino folda mavhidhiyo ese atinoita kana ayo atinotora achaiswa.
Favorites. Tinogona kutara pikicha seyatinofarira kana tikabata moyo unoonekwa pazasi peumwe neumwe wavo. Izvi zvinouya zvinobatsira kuve nemapikicha atinoda zvakanyanya mune imwecheteyo folda.
Screenshots. Iyi sarudzo nyowani muIOS 9 umo ma skrini ese achapinzwa. Icho chinhu chinouya chinobatsira kana tikatora akawanda akabata pazuva kubvira, kana tichida, tinogona kuadzima ese kamwechete.
Kuzvionera wega. Izvo zvakare zvitsva muIOS 9 uye ese mafoto akatorwa neFaceTime kamera ichaenda mune ino folda.
Kubviswa. Mifananidzo yese nemavhidhiyo zvichaenda ku "dzadzimwa" dhairekitori uye zvichave zviripo kwemazuva makumi matatu, kunze kwekunge tazvidzima nemaoko. Ive nekuchenjerera neizvi, kuti vashandisi vazhinji vanopedzisira vanyunyuta kuti vashaya nzvimbo uye inogarwa neiyi folda.
Kana isu tichida kugadzira dambarefu, isu tinobata pane yekuwedzera chiratidzo, isu tinopinda zita uye tobva tabata OK. Asi kana izvo zvatiri kuda kugadzira dhairekitori iro rinogona kunge riine maalbum mukati, isu tinodzvanya nekubata iyo yekuwedzera chiratidzo (+) kwechipiri tobva tabata paGadzira folda.
1 Sarudza mifananidzo yakawanda
2 Rongedza mifananidzo neiyo Mifananidzo app
Sarudza mifananidzo yakawanda
MuIOS 9 tinogona kusarudza mifananidzo yakati tisina kusimudza munwe. Kuti tiite izvi, isu tinongobata imwe uye tinotsvedza kurudyi kana kuruboshwe. Kana mamaki ekusarudza atanga kuoneka, isu tinogona ikozvino kutsvedza kana kudzika kuti tisarudze nekukurumidza. Kana tikatsvedza kana kudzika kubva pakutanga, zvatichaita kufambisa mifananidzo yese.
Rongedza mifananidzo neiyo Mifananidzo app
Icho chinowanzoitika ndechekugadzirisa mufananidzo nekuuchekerera kana kutenderera. Kana tangobata edit, iri kumusoro kurudyi, pazasi tichaona matatu tabo. Yekutanga (padhuze nekanzura) ndeyekucheka, kutenderera kana kushandura fomati.
Para kurima mufananidzo isu tinongofanirwa kufambisa makona kune iyo yatinoda. Wobva wadzvanya OK.
Para tenderera mufananidzo, isu tinongobata pane iyo icon inoratidzwa mune yapfuura skrini. Icharamba ichitendeukira kuruboshwe.
Para chinja mafomati, kana tichida kuisiya muna16: 9, semuenzaniso, tinobata bhatani randakamaka mukutora uye tobva tasarudza fomati yaunoda.
Nekubaya pamapoinzi matatu kumusoro kwekuruboshwe tinogona kuvhura mumwe mupepeti wemifananidzo, sePixelmator kana Skitch.
Kana tikabata iyo Wand, iko kunyorera kuchaedza kunatsiridza ese ma parameter kuti riite kunge rakanakisa, zvese otomatiki.
Kana tikasarudza icon yepamusoro pakati, tinogona bvisa maziso matsvuku. Ndakaiyedza nemufananidzo wandaive nawo wembwanana yemukoma wangu wanga usiri wakatsvuka zvakanyanya, asi chimwe chinhu chakabvisa kupenya kwacho.
Isu tinewo anowanikwa mafirita akasiyana siyana Ivo vanowanikwa nekugunzva icon iri pakati, iyo yakaita semapoinzi matatu muchimiro chetriangle. Isu tinongofanirwa kusarudza yatinoda zvakanyanya.
Mune icon inoratidzika segumbo kuwedzera kana kudzikisa vhoriyamu, tinogona gadzirisa mwenje, ruvara uye riite nhema uye chena.
Usazeze kupindura kana ndasiya chimwe chinhu kana paine chausingazive.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Mashandiro anoita Mapikicha Anoshanda muIOS 9
Ndine urombo, mumwe munhu angandibatsira nekuti mu ios 8 maalbamu angu akadzimwa, handina reel kana mavhidhiyo kana ndichangobva kudzima chero chinhu. Ini ndinongova nemifananidzo yese pamwe chete.Ndatenda
Mhoro, Alfonso. Mune iyo iPhone masetingi, muchikamu chemifananidzo, une iyo iCloud Photo Library inoshanda? Kana zvirizvo, reel yako iri mugore uye inowanikwa pane chero chishandiso. Iyo yakajairika reel.
Ini handina akagovana iCloud mafoto uye haasati aonekwa
Asi iwe unayo sarudzo inoshanda kubva kuiset iPhone? Iko kuenda kune iyo Zvirongwa / Mifananidzo uye Kamera uye kumisa iyo iCloud Photo Library.
Kana ini ndine zvese zvakaremara kubva kuICloud. Albhamu dzakanyangarika kubva kune rimwe zuva kuenda kune rinotevera.
Ndeipi vhezheni yeIOS yaunoshandisa? Mune imwe yapfuura pakanga pasina reel.
Muchikamu chepasi unoonei? Mifananidzo uye chimwe chinhu, handiti?
mapikicha uye maalbhamu uye mune maalbum ayo anga achifanirwa kuve reel, mavhidhiyo, anononoka kufamba mavhidhiyo, nezvimwewo hapana chinhu
Uye iwe unowirirana sei neTunes? Kana yakanyangarika, inogona kunge iri mhosho. Ini ndaimanikidza reboot uye kana ikasashanda kwandiri, ini ndaizodzorera.
ndakadzorera iphone ndichibva ndatakura backup uye inoramba yakadaro
Zvinoshamisira zvaunotaura. Ini ndaizodzorera ndisina kupora iyo backup. Iwo maficha, manotsi, nezvimwe, ndaizozvifananidza neICloud uye izvo zvaizozvidzorera. Zvimwe zvese (zvishandiso, mapikicha, nezvimwewo) zvaizoendeswa kune iyo iPhone nemaoko.
Ini ndichamirira kuti ndione kana ios 9 yabviswa kana ndikasaedza izvo, ndatenda.
Oscar paez akadaro
Manheru akanaka shamwari, ini ndaida kuziva kana iwe uchikwanisa kudzoreredza maalbum, zvimwe chete zvinoitika kwandiri panguva ino uye handizive zvekuita ... Zvinondibatsira
Zvinozivikanwa here kana zuva 9 iri kuvhurwa uye tinogona kugadzirisa kune ios 9? Kana kuti ichazongoratidzwa uye kusunungurwa gare gare?
Mhoroi Jesu. Parizvino, iyo vhezheni itsva yakaburitswa rinenge vhiki mushure mekuunzwa kweiyo iPhone. Kana pasina chakaitika, beta yekupedzisira yevanogadzira (iyo Goridhe Master) ichaburitswa musi wa9 uye svondo gare gare, iro rekupedzisira vhezheni vhezheni. Kune kutaura kwaGunyana 18, asi isu tese tinogona kukanganisa. Iyo yekupedzisira beta yanga ichitarisirwa kweinopfuura mwedzi ...
Ndine iPhone 4s uye ndine iyo iOS 9.3 vhezheni uye kwemwedzi yakati wandei pandinoisa iwo mafoto ku facebook haina kuikanda kuIbhuku remapikicha album ndinovimba vanondibatsira
Kubva pazuva rimwe kusvika rinotevera pane yangu iphone reel uye iyo yakadzimwa folda yakanyangarika, zvese zvakarongeka zvakasiyana, ndakaverenga uye ini ndoona kuti akati wandei ari kubvunza iwoyu mubvunzo, ini ndaida kuona kana paine mhinduro yeichi kana chiri chimwe chinhu iyo Apple yakaitwa. Iyo vhezheni yandinayo ndeye 9.3.2
Ndatenda zvikuru nemhinduro yako Pablo. Nekudaro, musi wa9 ivo vachapa zuva repamutemo reios 9, handiti? Parizvino ndine beta 5 yevagadziri, saka kunyangwe iri zuva 9 ndichave nebeta nyowani inogadzirisa madiki aya
Ndofunga kudaro. Uye, kana pasina chinoitika, iwe unenge uinewo Tenzi weGoridhe musi wa9.
Zviri kuitika kwandiri kuti kubvira pandakagadzirisa vhezheni yacho pandinoisa mapikicha vanoenda kumifananidzo yakadzvanywa kubva paserura kwete kuiyo ial album paFacebook. Pane chero munhu anoziva kuti izvi zvinofanirwa nei? Ini ndinoaisa iwo zvakafanana neyakagara kubva kumafoto uye hapana. Ini handinzwisise kuti chii chakamunetsa. Ini handisi kufarira iyi vhezheni.
Ndeupi musiyano uripo neiyo iOS 8.4?
Hazvingave zviri nani here kana idzi nhau dzakabuda apo iOS9 yaiwanikwa kune veruzhinji? Ndosaka zvichizobatsira kune vanhu vazhinji (pamusoro pezvo, avo vava neIOS 9 inyaya yekuti ivo vanoziva maitiro ekuitora, saka ndinofunga vachaziva mabatiro emifananidzo ...)
Mhoroi, ndine dambudziko neApp photos paMac uye neIOS app.
PaMac ini ndinomaka mifananidzo ine mazwi akakosha kuti nditsvage uye zvinoenda zvakakwana. Nekudaro muIOS ine iwo iwo mafoto akawiriraniswa, ini ndinotsvaga nezwi rakakosha uye hapana chinobuda. Ari kungonditsvagira nzvimbo.
Mhoro! Ndine dambudziko, ini ndakagadzirisa yangu iPhone 6 kuenda iOS 9 uye kamera haishande, kana kumberi. Kana uchinge wasarudzwa, iyo skrini yakasviba, asi iine sarudzo dzese dzekumisikidza kamera. Zvandinoita?
Salvador Alvarado akadaro
Ndingaite sei kuti ndibvise mapikicha kubva kuiyo selfies dhairekitori, sezvo iwo avakanditumira neWhatsApp vakagara ipapo uye isingandipe marara anogona kuita, inondiudza kuti haigadziriswe, kuti kana ndichida kutevedzera iyo woigadzirisa, asi iyo yekutanga inogara imomo
Pindura Salvador Alvarado
Ini ndaida kuziva maitiro ekuchinjisa mafoto kubva pakombuta yangu kuenda kuAlbum «Camera Roll» pane iPhone
Mhoroi, ndine dambudziko, ndinoda kuziva kana ndichigona kupora mapikicha akabviswa nekukanganisa mufaira bvisa mapikicha, muzukuru wangu akatora foni yangu, ndaida kuitora asi handina kuziva kuti ndakaidzima zvachose
Ini ndoda kuziva kuti ndinogona kupora asi sei
Ini handioni Facebook iOS album kuti ndibudise mafoto, sezvo ini ndichigadzirisa kune iOS 9 iyo mifananidzo inoenda kune iyo biography.
Zviri kuitika kwandiri kuti kubvira pandakagadzirisa vhezheni iyi pandinoisa mapikicha vanoenda kumifananidzo yakadzvanywa kubva paserura kwete kuiyo ial album paFacebook. Pane chero munhu anoziva kuti izvi zvinofanirwa nei? Ini ndinoaisa iwo zvakafanana neyakagara kubva kumifananidzo uye hapana. Ini handinzwisise zvinoitika kwaari. Ini handisi kufarira iyi vhezheni. Kana mumwe munhu achigona kundibatsira, ndatenda pamberi.
Chinhu chimwe chete ichi chinoitika nemapikicha angu akagovaniswa paFacebook, vanoenda kumafaira ekuisa kwete kune ios album
Mary Casas akadaro
Neniwo, pane munhu akawana mhinduro here?
Pindura kuna Mary Casas
Ehe, ndapota, ndine dambudziko irori
Ehe ndapota batsira nazvo!
Ndingaite sei kuti kana ndikaisa pikicha kubva pane yangu reel kuenda kuFacebook inoti kubva kuna ios
Zvakafanana zvinoitika kwandiri ..
Ini handisi kuwana yangu iOS albam kana ndichiisa pikicha kune yangu Facebook, kana mumwe munhu achigona kundibatsira ini ndingazvikoshe
Hi Pablo, ndinoda kuziva kuti chii vhidhiyo bitrate inounza ios 9 mu 1080 60p fomati, ndatenda
Zvinoitika kwandiri kuti kubva pane imwe nguva kuenda kune imwe reel folda uye iyo ichangobva kudzimwa folda yakanyangarika uye zvinoitika izvozvi ndezvekuti ini handikwanise kudzima mapikicha akatobviswa uye izvi zvinozadza nzvimbo…. Unogona kundibatsira here nekutenda uku
Mhoroi, zvimwechetezvo zvinoitika kwandiri kuti vazhinji venyu makanyangarika maalbum ese kubva pane yangu reel, mumwe munhu awana mhinduro kana kuti nei zvakaitika? Zvichava zvechiitiko cheApple here?
Mhoroi, ndiri kuyedza kutora skrini asi hapana chinoonekwa, chete mufananidzo unoti PNG, iwo mafoto anoshanda zvakajairika asi iyo skrini haina, unogona kundibatsira?
Ungaziva sei kana yako iPhone yatapukirwa neiyo yakaipa tweak hutachiona